Tọzdee, Disemba 20, 2005 Tuesday, October 21, 2014 Douglas Karr
M na - eme Microsoft Office na - egwuri egwu taa ma mepụta ụdị nke ga - ezigara ya API wee weghachite nzaghachi XML. Ebe ọ bụ na Office 2003 bụ XML agwakọtara, emesịrị m lelee anya etu m ga-esi mee ka XML lọghachitere iji chekwaa ya na tebụl ma ọ bụ ihe ndekọ oge.
Nke a bụ mgbe m chọpụtara na Microsof Office 2003 ejikọtara ya na XML (ma ọ bụ MSXML) site na GUI (Graphical User Interface) mana B throughGH through site na VBA (Visual Basic for Applications) engine. Nke ahụ pụtara na, agbanyeghị na enwere m ike ịnweta nzaghachi XML, ekwesịrị m iji koodu iji kọwaa XML ma soro ya rụọ ọrụ.
Echere m bụ na nsogbu ahụ bụ na VBA agbanwebeghị kemgbe Visual Basic 6.
IHE MICROSOFT: Melite usoro mmemme gị mgbe ị hapụrụ ndị gosipụtara ya na Interface Graphical User! Geeez.
Tags: Microsoft Officevisual BasicNlekọta Anya maka Ngwa